အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့အတွက် သေဒဏ်ပေးခြင်း !!! - JAPO Japanese News
ဂါ 18 Feb 2020, 11:31 မနက်
အခုရက်ပိုင်း ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတွေမှာ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေ အကြောင်း ကြားနေရပါတယ်။ မီဒီယာတွေအရှေ့မှာပဲ တောင်းပန်တာတွေလုပ်ပြီးတော့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲ ပြဿနာတွေကို အဆုံးသတ်လိုက်ကြပေမဲ့၊ ယခင်အချိန်ကာလမှာတော့ တောင်းပန်တာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးဘဲ သေဒဏ်အထိပါ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
“အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ ယဥ်ကျေးမှုတစ်ခုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ” လို့ဆိုတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ရှိခဲ့ပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တာ ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတောင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ မဂ္ဂဇင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဓါတ်ပုံဆရာတွေကလည်း နေရာတိုင်းမှာရှိနေပြီး၊ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့ သတင်းတွေကိုဖောက်ထုတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။
ဖြစ်ရပ်မှန်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ မီဒီယာတွေအရှေ့မှာပဲ တောင်းပန်တာတွေလုပ်ပြီး ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းကြပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ လူတွေက အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးယူတာတို့ ၊ ယူကြုံးမရဖြစ်တာတို့ စတဲ့ခံစားချက်တွေ သိပ်ပြီးမရှိတော့သလိုပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ယခင်အချိန်ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ အဲ့ဒီလိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါ ပြစ်ဒဏ်ကအရမ်းပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပြစ်ဒဏ်က အရင်အချိန်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းမှာ ချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဥပဒေက အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွန်ခဲ့သော နှစ် ၈၀၀ မတိုင်ခင်ကဂျပန်နိုင်ငံမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။
ဒီလိုကိစ္စအမှုဖြစ်သွားပြီဆို ကာယကံရှင်ရဲ့ သဘောကိုတောင်မမေးတော့ဘဲ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေတစ်ဝက်ကိုသိမ်းယူလိုက်ပါတယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဘဝတိုးတက်ဖို့ကိုလည်း ပိတ်ပင်တားဆီးလိုက်ပါတယ်။ အကယ်၍ ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ အဝေးမှာရှိတဲ့ လူမနေတဲ့ကျွန်းတွေဆီ ပို့ပစ်လိုက်ပါတယ်။ နယ်နှင်ဒဏ်သဘောမျိုးပေ့ါ။
တော်တော်လေးပြင်းထန်တဲ့ စီရင်ချက်ဖြစ်ပေမဲ့၊ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ပိုပြီးတော့တောင် ပြစ်ဒဏ်ကကြီးမားလာပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်က ဆာမူရိုင်းတွေကြီးစိုးလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆာမူရိုင်းတွေကိုအဓိကထားတဲ့ ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ ဆာမူရိုင်းရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူက တစ်ခြားသူတစ်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်မိသွားတဲ့အခါ အဲ့ဒီမိန်းမဖြစ်သူကို ဆာမူရိုင်းကသတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အကယ်၍ မသတ်ရက်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျူးလွန်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ သူ့ရဲ့အဖော်ကိုသာမက အဲ့ဒီဆာမူရိုင်းကိုပါ သေဒဏ်ချတရားစီရင်လိုက်ပါတော့တယ်။
မိမိအသက်မသေချင်လို့ ကျူးလွန်သူဇနီးကို သတ်ပစ်မှာလား?
ဒါမှမဟုတ် မိမိကိုသစ္စာဖောက်ခဲ့တဲ့သူကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်လို့သတ်ပစ်မှာလား?
တော်တော်လေးကို ပြင်းထန်တဲ့ ဥပဒေပဲနော်….
အဲ့ဒီအချိန်ကာလက ဆာမူရိုင်းတွေကိုအဓိကထားခဲ့ပေမဲ့လည်း တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းလာတဲ့ အဲဒိုခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဥပဒေကအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ သူ့မယားကိုပြစ်မှားတဲ့အမျိုးသားကို သေဒဏ်ပေးတဲ့ စနစ်ဖြစ်သွားပါတယ်။
လင်ယောက်ျားကနေ ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့အမျိုးသားကို သတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသွားပါတယ်။
အကယ်၍ မိမိရဲ့ သမီးဖြစ်သူက ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်တဲ့အခြေအနေမှာတော့ ဖခင်ဖြစ်သူက သူရဲ့ သမီးဖြစ်သူကို သေဒဏ်ချမှတ်ရပါတယ်။
မိဘကအသတ်ခံလိုက်ရမယ်ဆိုရင် ကလေးကလူသတ်သမားကို ပြန်ပြီးလက်စားချေဖို့ ခွင့်ပြုပါတယ်။ မျှတတယ်လို့ ပြောရမယ်နော်။
သားသမီးဖြစ်သူကလည်း လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုမရှိ ဆိုးသွမ်းနေမယ်ဆို၊ မိဘဖြစ်သူကလည်း အဲ့ဒီသားသမီးကို သေဒဏ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အသက်ကို သတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘဲ မိဘတွေရဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်ဆောင်တယ်ဆိုပြီး စဥ်းစားကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်းထန်တဲ့စည်းကမ်းကြောင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့၊ လူ့အသက်ကို အလွယ်တကူပဲ သတ်ကြတယ်လို့တော့ ထင်မိပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ စဥ်းစားသုံးသပ်တာတွေက မတူတော့ဘူးပေါ့နော်
အနုပညာရှင်တွေက မီဒီယာတွေအရှေ့၊ တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ တောင်းပန်နေတာတွေကိုကြည့်ပြီး သူတို့ကိုနည်းနည်းသနားမိသွားပေမဲ့၊ အရင်အချိန်တွေလို သေဒဏ်ပေးတဲ့အထိတော့ စီရင်ချက်တွေမရှိတော့လို့ တော်ပါသေးတယ် လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။
စာဖတ်သူတို့ရော အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သေဒဏ်ချမှတ်တာကို ဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်သုံးသပ်မိပါသလဲ?